“Sesiphi kwezi zixhobo ozisebenzisayo ukunciphisa umjikelo wakho wokuthengisa? Uwadala njani amathuba eqela lakho malunga nokuthengiswa? Ukusebenzisa izixhobo ezifanelekileyo kuya kukunceda ufikelele “kwintengiso yegolide.”
Andikwazanga ukuvumelana nawe ngakumbi. Ukusebenzisa izixhobo ezifanelekileyo-kwaye kufuneka nditsho ukuzisebenzisa ngokufanelekileyo-kunokukongela ixesha elininzi kwaye wenze umsebenzi wakho usebenze ngakumbi. Nangona kunjalo, ingxaki ngale nto kukuba abantu abaninzi abakwazi ukusebenzisa ezi zixhobo okanye bazisebenzisa ngokungafanelekanga.
Enkosi ngezimvo zakho, Anne! Nam ndivumelana nawe. Ndicinga ukuba ukusebenzisa izixhobo ngokufanelekileyo kuyingxaki kule mihla – abantu bayaphazamiseka okanye bangaziniki ixesha lokufunda. Ke ngoko, unokuba ulahlekelwe ngamathuba amaninzi awohlukeneyo.
ya jenn ukusebenzisa izixhobo ngokufanelekileyo yinto enkulu ngoku, ingcaciso entle tanq
Ndiyayithanda indlela DK New Media liqabane kunye ne-Tinderbox kwaye i-infographic icebisa i-Tinderbox 300% ngaphezulu kwaso nasiphi na esinye isixhobo esilapha. Ndiyazibuza ukuba zingaphi ezinye izixhobo ezilapha ezidityaniswe nazo DK New Media kunye ne-Tinderbox. Ngaba kuninzi kakhulu ukuba nethemba lombono ogcweleyo wentengiso/intengiso yesoftware esinayo?
UBrian Stout (@thinkstout)
Ndiyayithanda i-infographic, Jenn. Wenze kakuhle kakhulu-ubuncinci ngokwembono yomntu obekwi-silos zombini zekhonkco lemfuno. Ndiyavumelana nezi zimvo zingasentla-abantu bayaphuma kwinqanaba lokuthatha ezi zixhobo.
Enkosi, Brian! Ndiyazixabisa iingcinga zakho. Ndicinga ukuba zininzi kakhulu izixhobo phaya kangangokuba kunzima ukwazi ukuba ukhangela ntoni okanye yintoni ekufuneka zisetyenziselwe yona. Oko kuya kuba yinto ebalulekileyo ukucinga ngayo kwi-branding point, apho iinkampani kufuneka zikwazi ukucacisa ngokufanelekileyo oko zinokusetyenziselwa / kufuneka zisebenzise. Kwaye, kwelinye icala laloo ngqekembe, abasebenzisi kufuneka bazi into abayifunayo ngokunjalo ukuze bangatyali imali kwinto engayi kuxhasa injongo yabo kwasekuqaleni.